यो हो नि काइदा - Worldnews.com
यो हो नि काइदा
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आइतबार महिला सांसदहरूले ३३ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ। उहाँहरूको मागलाई धरहरा अन्यथा ठान्दैन। यो गर्नु पनि पर्छ। हिजो धरहराले दुरबिन घुमाउँदै जाँदा यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा प्रम पत्नी डा. साब पनि पो हुनुहुँदोरहेछ। यो देखेर धरहरालाई पनि रमाइलो लाग्यो। अब पत्नीले नै भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले कसो नमान्नुहोला ? अब जान्ने हो भने युवाहरूको पनि एउटा संगठन बनाएर जयवीरलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। छोराले गएर पिताजीसँग माग राखेपछि नसुन्ने कुरै छैन। युवाहरूलाई ५० प्रतिशत मन्त्री बनाइयोस् भनेर माग राख्ने त्यसपछि त मन्त्रीमा युवैयुवा। क्या मज्जा⁄ यो हो नि काइदा। अरु संगठनले पनि यस्ता कुरा बुझे पो मुलुक बन्छ। खोई कसैले बुझेको होइन। कि कसो पाठकबृन्द ! The post यो हो नि काइदा appeared first on News of Nepal. ...
गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले गृह प्रशासन सुधार गर्न ८२ बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्दा केही योजना मन्त्रीले कसरी पूरा गर्लान् भन्ने कुराले धरहरा चिन्तित भएको छ। उहाँले...
नेता चाहर्दै प्रहरी
गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले गृह प्रशासन सुधार गर्न ८२ बँुदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा केही योजना मन्त्रीले कसरी पूरा गर्लान् भन्ने कुराले धरहरा चिन्तित भएको छ । उहाँले...
News of Nepal 2017-06-30
कार्टुन मन पर्यो
हिजो आइतबार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित कार्टुन निकै मर्मस्पर्शी लाग्यो। आगामी दिनमा पनि नेपाल समाचारपत्रले यस्तै कार्टुन छापेमा हामी नेपालीको मन जित्नेछ। साँच्ची नै...
तीज हिन्दू नारीको महान् चाड हो। यसपालिको तीज सकिएको पनि छ। सकिए पनि धरहराको दूरबीनमा छायांकन भएको एउटा दृश्य देखाउन धरहरा चाहन्छ। भगवान् शिवको आस्था राखेर मनाइने यो चाड...
अब संसद छोडिन्न प्रधानमन्त्री छनौटका लागि कार्यतालिका अनुसार आज संसदमा निर्वाचन हुनेछ। विपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको अवस्थामा यो क्रम फेरि रोकिने संभावना पनि छ।...
आखिर के भएन १ सय दिनमा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका १ सय दिनका उपलब्धी भर्खरै सार्वजनिक भएका छन्। शेरबहादुर देउवा धेरै काम गरेर थारै मात्रै जनतासामू ल्याउनेमा १ नम्बरमा पर्नुहुन्छ। त्यसै कारण...
News of Nepal 2017-09-18
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका १ सय दिनका उपलब्धी भर्खरै सार्वजनिक भएका छन्। शेरबहादुर देउवा धेरै काम गरेर थारै मात्रै जनतासामू ल्याउनेमा १ नम्बरमा पर्नुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले केही गर्न नसकेको भन्दै धेरै आलोचना पनि हुने गरेको छ। उहाँलाई धरहराले आलोचना गर्दैन। बरु उहाँले गरेका र सार्वजनिक गर्न छुटेका कार्यक्रम हामी धरहरामार्फत् सार्वजनिक गर्छौं। देउवा सरकारले भ्रष्टाचार कम...
निर्वाचन परिणाम पुरै नआइकन धारणा बनाउने र बुरुक बुरुक उफ्रने प्रबृत्तिलाई लिएर अहिले धरहरा वरपर चर्चा हुन थालेको पाइएको छ । पहिला संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको नतिजापछि माओवादीका नेताहरुको भाषण शैली अहिले धरहरालाई पनि याद भइरहेको छ । | कमरेड पुकदा र बाराभको भाषण यति चर्का र अपमानजनक हुन्थे कि भोट हाल्ने मान्छेले पनि कस्तालाई भोट हालिएछ भनेर केही दिनमै आलोचना गरेको सुनिन्थ्यो ।...
भाषण कसले लेखेको ?
खै के खै के⁄ हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि कुन्नी के भाका हुन्, धरहराले बुझ्न सकेको छैन। कहिले जनताले दिएको ज्ञापनपत्रलाई भाषण भनेर पढ्ने, जनताले प्रश्न सोधे तपाईं को भन्ने जस्ता काम गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले बिहान बिहान नै के के खानुहुन्छ, धरहराले पत्ता लगाउन सकेको छैन। शुक्रबार बिहान ६२औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा...
ध्रुव गैँडा पाँच वर्षमा बनाइदिए हुन्न र?’ यो भनाइ हो जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला इकाइ प्रमुखले एक भूकम्पपीडितलाई घर छिटो बनाउनुपर्यो भनी गरेको आग्रहको प्रतिउत्तर। हामी यसैबाट प्रस्ट बुझ्न सक्छौँ कि घर बनाउन विभिन्न व्यथाहरू लुकेका छन् भनेर। वास्तवमा मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू गाँस, बास, कपास नै पहिलो श्रेणी हुन्। राम्रो लाउने, मिठो खाने र सुरक्षित बासस्थानको चाहना कसलाई पो...
राजेन्द्र महतो नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने अडान कायमै राख्दै आएको छ। राजपाकै कारण सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि सरकारले दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने कसरत गरिरहेको छ। तर आवश्यक बहुमत...